यूकेमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
लण्डन । यदि तपाईँ यूकेमा बस्दै हुनुहुन्छ र स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले यूके स्थायी निवासको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ – जसलाई यूके अनिश्चितकालीन बिदा पनि भनिन्छ – र त्यसपछि यूकेको पूर्ण नागरिकताको लागि आवेदन गर्ने मौका छ ।
विदेशीहरु धेरै जसो अवस्थामा यूकेमा कानूनी निवासको पाँच बर्ष पछि रहनको लागि अनिश्चितकालीन बिदाको आवेदन दिन सक्छन् । यद्यपि केहि उदाहरणहरुमा यो चाँडै हुनेछ । यदि तपाईँ १२ महिना को लागी एक स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पाँच बर्षको निवास (चाँडै केहि अवस्थामा) यूकेको नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । आवश्यकताहरु तपाईँको राष्ट्रीयताको आधारमा भिन्न हुन्छन् । चाहे तपाईको यूकेमा परिवार छ, र तपाई कुन प्रकारको भिसामा आइपुग्नुभयो । यो प्रक्रिया ईयू र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) देशहरुका नागरिकहरुको लागी सरल छ, यद्यपि स्थिति परिवर्तन हुन सक्छ ।
वर्तमान यूके नागरिकता कानून सन् १९८१ को ब्रिटिश नागरिकता अधिनियममा आधारित छ । र ब्रिटेनको शाही इतिहासको कारण जटिल छ, पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशहरु र ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रहरुबाट विदेशी नागरिकहरुको केहि वर्गहरुलाई सरलीकृत मार्गहरुको माध्यमबाट यूकेको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि ।
गैर–ईयू÷ईएफटीए नागरिकहरुको लागि युकेको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि थोरै गाह्रो भने छ । दुबै प्रक्रियाहरु अब बेलायतको परीक्षणमा एक जीवनमा बस्नको लागि सामिल छ । यहाँ नागरिकताको लागि ५ आधारभूत आवश्यकतालाई महत्व दिइन्छ । जस्तै:
१८ वर्षभन्दा माथिको हुनुहोस् ।
‘राम्रो चरित्र’को हुनुहोस् ।
हाल बेलायत मा बस्दै हुनुहुन्छ ।
अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नुहोस् ।
‘यूकेमा जीवन’परीक्षा पास गर्नुहोस् ।
माथि उल्लेख गरिएका ५ आधारभूतमध्य अन्तिमको ‘यूकेमा जीवन’परीक्षा पास गर्नुपर्ने विशेष मानिन्छ । जसकारण यसकुरालाई यो लेखमा थोरै प्रष्टाउँदै छौंँ । १८ बर्ष भन्दा कम उमेर वा ६५ बर्ष भन्दा माथि उमेर भएकाले शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षा दिनुपर्छ ।
परीक्षण लागत ५० डलर पर्छ । यो परिक्षण तपाईँ नजिकै बस्ने र सहज हुने यूकेको परिक्षण केन्द्रमा लिईन्छ । अग्रिम बुक गर्न आईडी र ठेगानाको प्रमाण प्रदान आवश्यक हुन्छ ।
यूके जीवन परिक्षणमा ४५ मिनेट समय लाग्छ । जहाँ यूकेका परम्पराहरु र यसको आसपास आधारित २४ प्रश्नहरु सोधिन्छन् । प्रश्नहरु एक ह्यान्डबुकमा परिक्षणसंग सम्बन्धित जानकारीमा आधारित छन् । पुस्तिका १२.९९ डलरमा किन्न सकिन्छ ।यूकेमा जीवन परीक्षणका बारे थप जानकारीका लागि यूके भिसा र आप्रवासन वेबसाइट हेर्न सक्नुहुनेछ ।
यूकेको नागरिकता वा स्थायी निवास, कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ?
याद गर्नुहोस् यूके अझै एक ईयू सदस्य देश हो । गैर–ईयू÷ईएफटीए देशहरुबाट नागरिकहरुको लागि विभिन्न सर्तहरु लागू हुन्छन् । यदि तपाईँ एक ईयू÷ईएफटीए नागरिक, वा एक ईयू÷ईएफटीए नागरिकको एक नातेदार वा साझेदार हो । यदि तपार्इँ एक गैर गैर–ईयू÷ईएफटीए नागरिक हुनुहुन्छ, यूकेमा बस्नको लागि अनिश्चितकालीन बिदाको आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । तपाईँ निम्न मध्ये कुनै भिसामा पाँच बर्षसम्म यूकेमा कानूनी रुपमा बस्नुभएको छ । टियर १, टियर २, टियर ५, वा घरेलु कामदार भिसा, पुर्खा भिसा, सेवानिवृत्त व्यक्ति भिसा ?
उदाहरणका लागि यदि तपाईँ एक टर्की व्यवसायी भिसा मा हुनुहुन्छ, चार बर्ष पछि नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । नागरिकताको आवेदन मार्गहरुमा केही परीक्षणका शर्तहरु छन् । ख्याल गर्नुहोस् , यूके अनिश्चितकालीन बिदाको आवेदनको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।
गैर–ईयू÷ईएफटीए नागरिकहरु चहेमा स्थायी रूपमा यूकेमा बसोबास गर्न नागरिकताको आवेदन गर्न सक्छन् । यदि उनीहरु कम से कम पाँच वर्ष देशमा कानूनी रूपबाट बसेको छ (लामो समय बिदेशमा बिताईएको छैन) । यदि तपाई एक यूके नागरिकसँग साझेदारीमा वा विवाहित हुनुहुन्छ, तपाई तीन वर्ष पछि यूके नागरिकताको लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
निवासको अधिकार (आरओए) र अन्य ब्रिटिश नागरिकहरु को लागी यूके नागरिकता
तपाई एक ब्रिटिश ओभरसीज टेरिटरीको नागरिक हुनुहुन्छ । १ जनवरी १९८३ भन्दा पहिले यूकेमा जन्मेका आमा बुबासंग जन्मेको राष्ट्रमण्डल देशका नागरिक हुनुहुन्छ । तपाई वर्तमान राष्ट्रियता कानून अन्तर्गत एक ब्रिटिश नागरिकको रूपमा योग्य हुन सक्नुहुन्छ । आरओएको लागि योग्य ती यूकेमा सजिलै बसोबास गर्न सक्छन् । यूकेको नागरिकता दर्ता गर्नको लागि प्राकृतिककरण प्रक्रियाको माध्यमबाट जान सकिन्छ ।
तपाई निम्न तरिकाहरु बाट यूकेको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छः
वंश द्वारा यदि तपाई एक यूके नागरिक हुनुहुन्छ भने प्राकृतिकीकरण, दर्ता वा दत्तक ग्रहणको माध्यम बाट यूके नागरिकको आवेदन दिनसक्नुहुन्छ ।
जन्म द्वारा यूके नागरिकता
१ जनवरी १९८३ बाट, यूके (वा ब्रिटिश ओभरसीज टेरिटरी) मा जन्मेको बच्चा कम्तीमा एक अभिभावक जो यूकेको नागरिक हो वा यूकेमा स्थायी रूपबाट बसोबास गरीएको छ स्वचालित रूपबाट यूकेको नागरिकता प्राप्त गर्दछ ।
वंशद्वारा यूके नागरिकता
१ जनवरी १८८३ बाट, युके बाहिर जन्मेको बच्चाले वंशजको माध्यमबाट बेलायतको नागरिकता प्राप्त गर्दछ । यदि कम से कम एक आमा बुबा जन्म, प्राकृतिकीकरण, दर्ता वा दत्तक ग्रहण को माध्यम बाट यूके को नागरिक हो । १९८३ भन्दा पहिले, यूके र कोलोनीजको नागरिकता स्वचालित रूपमा मात्र एक पुस्ताको लागि र केवल बुबाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो, यदि आमा बुबा विवाहित हुनुहुन्थ्यो । २००९ पछि , १९८३ भन्दा पहिले एक ब्रिटिश आमाको जन्म भएकाहरु वंशको माध्यमबाट यूकेको नागरिकताको लागि आवेदन दिन योग्य छन् ।
प्राकृतिकीकरण द्वारा यूके नागरिकता
तपाई युनाइटेड नागरिकताको लागि पाँचबर्षको निवास पछि, वा यदि तपाईँ एक यूके नागरिकसंग साझेदारी मा विवाह गरीरहनु भएको छ वा तीन बर्षको निवास पछि प्राकृतिकीकरण द्वारा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । तपार्इँ निम्न आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नको लागी आवश्यक छः
अंग्रेजी को पर्याप्त ज्ञान
यूकेको परीक्षामा जीवन उत्तीर्ण
कुनै गम्भीर आपराधिक सजाय छैन
पछिल्लो पाँच बर्षमा यूके बाहिर ४५० दिन भन्दा बढी बिताएको छैन (पछिल्लो तीन बर्षमा २७० दिन यदि पार्टनर युकेको नागरिक हो) । र पछिल्लो वर्ष ९० दिन भन्दा बढी यूके भन्दा बाहिर रहेको छैन । यूके नागरिकता आवेदनमा निर्णय सामान्यतया छ महिना भित्र बनाइन्छ । याद गर्नु जब तपाईँको यूके नागरिकता आवेदन बनाउनुहुन्छ, आफनो बायोमेट्रिक जानकारी निम्न कागजातहरुको साथ प्रमाणित गरी प्रदान गर्नुहोस् ।
अंग्रेजी भाषाको ज्ञान
तपाईँ यूके जीवन परीक्षा पास गर्नुभयो
यूकेमा कानूनी निवास
अनिश्चितकालीन बिदा रहन
सम्बन्ध स्थिति (यदि एक यूके नागरिकसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने )
तपाईको मेहनत को कमाई लाई सहि मुल्यांकन गर्दै बेलायत बाट मनिटु लिमिटेड ले नेपाल को लागि निशुल्क पैसा ट्रान्सफर को योजना ल्याएको छ। जस अन्तर्गत तपाई ले मनिटु को एप अथवा वेबसाइट https://bit.ly/3jt7qvH प्रयोग गरि उत्कृष्ट विनिमय दर सहित छिटो र सुरक्षित तरिका ले नेपाल मा पैसा पठाउन सक्नु हुन्छ। पैसा पठाउदा कुनै शुल्क लाग्ने छैन।